CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: HD Digital TV Off Air from 19:59 on 21 Mar to 20:03 on 21 Mar. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 14:55 today to 15:05 today. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 14:55 yesterday to 15:05 yesterday. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 14:55 on 04 May to 15:05 on 04 May. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 16:15 today to 17:34 today, HD Digital TV Reduced Quality from 16:15 today to 17:00 today. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 16:15 yesterday to 17:34 yesterday, HD Digital TV Reduced Quality from 16:15 yesterday to 17:00 yesterday. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 16:15 yesterday to 17:34 yesterday, BBC Digital TV Reduced Quality from 17:18 today, HD Digital TV Reduced Quality from 17:46 today, HD Digital TV Reduced Quality from 16:15 yesterday to 17:00 yesterday. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 17:18 today to 20:45 today, BBC Digital TV Reduced Quality from 16:15 yesterday to 17:34 yesterday, HD Digital TV Reduced Quality from 17:46 today to 20:48 today, HD Digital TV Reduced Quality from 16:15 yeste [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 16:15 on 14 Jun to 17:34 on 14 Jun, BBC Digital TV Reduced Quality from 17:18 yesterday to 20:45 yesterday, HD Digital TV Reduced Quality from 16:15 on 14 Jun to 17:00 on 14 Jun, HD Digital TV Reduced Quality [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 17:18 yesterday to 20:45 yesterday, BBC Digital TV Reduced Quality from 16:15 on 14 Jun to 17:34 on 14 Jun, HD Digital TV Reduced Quality from 17:46 yesterday to 20:48 yesterday, HD Digital TV Reduced Quality [BBC]